Football Khabar » ‘पिएसजीलाई ब्लक गर्न’ सिटीद्वारा मेस्सीलाई नयाँ अफर : अफरमा के छ ?
‘पिएसजीलाई ब्लक गर्न’ सिटीद्वारा मेस्सीलाई नयाँ अफर : अफरमा के छ ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका सुपरस्टार लिओनल मेस्सी फ्रेन्च क्लब पिएसजी जान सक्ने चर्चा सरुवा बजारमा एकाएक बढेपछि विगत लामो समयदेखि मेस्सीमाथि चासो देखाउँदै आएको इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीले नयाँ अफर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका रिपोर्टअनुसार सिटीले यो सिजनपछि मेस्सीलाई फ्री ट्रान्सफरमा भित्र्याउन नयाँ र आकर्षक अफर मेस्सीका एन्जेटसमेत रहेका पितालाई पठाएको छ ।
हाल ३४ वर्ष पुगेका मेस्सीलाई सिटीले सन् २०१६ बाटै अनुबन्ध गर्न चाहेको चर्चा छ । मेस्सीले यो सिजन सुरु हुनुअघि नै क्लब छाड्ने निर्णय गर्दा त्यसबेला मेस्सी सिटी जाने चर्चा चुलीमा थियो । तर, मेस्सीलाई बार्सिलोनाले फ्री ट्रान्सफरमा जान दिएन । र, मेस्सी परिबन्धमा परेर बार्सिलोनामै रहे ।
तर, यो सिजनको अन्त्यपछि अर्जेन्टिनी फरवार्डले बार्सिलोना छाड्ने करिब–करिब पक्का छ । उनलाई ठूलो अफरमा भित्र्याउन पिएसजी इच्छुक देखिएको छ । पिएसजीमा अर्जेन्टिनाकै प्रशिक्षक मोउरिसियो पोचेटिनो र आफ्ना पूर्वसहकर्मी नेइमार पनि रहेकाले मेस्सी पेरिस जाने सम्भावना प्रबल रहेको बताइन्छ ।
रिपोर्टअनुसार मेस्सीमाथि पिएसजीको प्रस्ताव र प्रयासलाई ब्लक गर्न सिटीले नयाँ अफर गरेको स्पेनिस मिडियाले जनाएका छन् । सिटीले मेस्सीलाई फ्री ट्रान्सफरमा भित्र्याएर पाँच वर्षका लागि सम्झौता गर्न चाहेको छ । त्यसका लागि उसले मेस्सीलाई पाँच सिजनका लागि ४३० मिलियन पाउन्ड तलब दिने गरी अफर गरेको छ ।
यसअघि मेस्सीले बार्सिलोना छाड्ने निर्णय गरेका बेला सिटीले मेस्सीलाई ६०० मिलियन पाउन्डको अफर पठाएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । आर्थिक संकटमा कारण सिटीले पहिलाको भन्दा रकम घटाएर घट्दो रकममा नयाँ अफर पठाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘मार्का’ का अनुसार सिटी अहिले खुलेरै मेस्सी भित्र्याउन लागिपरेको छ ।
प्रकाशित मिति ७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार २१:३९
‘बार्सा किलर’ एमबाप्पे युइएफए प्लेयर अफ् द विक घोषित
हल्यान्ड च्याम्पियन्स लिगको सर्वाधिक गोलकर्तामा चढे : यस्तो छ ताजा स्थिति
पहिलो लेगमा बार्सिलोनाविरुद्ध ह्याट्रिक गरेपछि दोस्रो लेगबारे एमबाप्पेको यस्तो भनाइ
रोनाल्डो ‘च्याम्पियन्स लिगका राजा’ : हल्यान्ड ‘नयाँ राजकुमार’ !
युरोपा लिगमा स्पेनिस ग्रानाडाले नापोलीलाई चखायो नमिठो हार !
युरोपा लिग : टोटनह्यामले निकाल्यो प्रभावशाली जित
युरोपा लिग : रियल सोसिडाडमाथि युनाइटेडको शानदार जित